स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नियुक्तिमा ‘यादवमात्रै’ – Jana Prashasan
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नियुक्तिमा ‘यादवमात्रै’
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव ‘यादववाद’को चंगुलमा यसरी फसेका छन् कि प्रदेशका मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका सांसद, केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति सबैतिर यादवको जगजगी छ । राष्ट्रिय सभामा यादव समुदायकै प्रमिला स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकदेखि सिंहदरबार वैद्यखाना र आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र, नरदेवी अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा खोजी–खोजी यादव नै । सबै ठाउँबाट मधेसी समुदायकै प्रमुखलाई लखेटेर यादवलाई खोजी–खोजी नियुक्ति दिएका हुन् । नरदेवी अस्पतालको प्रमुखमा भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएको आरोप खेपिरहेका श्यामबाबु यादवलाई राखिएको छ । सिंहदरबार वैद्यखानामा हरदेव यादव आएका छन् । छैटौं तहका कर्मचारी हुन् । नियमानुसार आठौं तहको कर्मचारीले मात्र प्रमुख हुन पाउँछन् । आठौं तहका वंशदीप शर्मा खरेललाई हटाएर जुनियर कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएसँगै खरेल अदालत गए र १५ दिनअघि मुद्दा जितेर आए पनि ढिम्किनै दिइएन । खरेललाई मन्त्रालयमा तानेर हरेन्द्रलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । ट्रमा सेन्टरको प्रमुखमा क्याबिनेटबाटै निर्णय गराई प्रमोद यादवलाई लगिएको छ ।
आठ महिना लामो रस्साकस्सीपछि वीर अस्पतालले प्रमुख पायो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकुलपतिमा मधेसीमूलकै डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरिएको छ । उनको पार्टीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीमा डा. सुरेन्द्र यादवलाई काखी च्यापे । प्रतिनिधिसभामा पार्टीले १६ सिट पाउँदा रेणु, रामसाह, सुरेन्द्र, सूर्यनारायण, रामबाबु र प्रदीप, उमाशंकर यादव समुदायकै । प्रदेश २ मा फोरमका ६ मन्त्री भएमध्ये ४ जना विजय, ज्ञानेन्द्र, योगेन्द्र र उषा यादव समुदायबाटै ल्याईएको जनआस्थाको समाचारमा छ ।
News Desk0response बिहिबार, चैत्र १४, २०७५